चीन सहायक सामग्री निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु - पूर्वी Argon रासायनिक
घर > उत्पादनहरु > अन्य रंग र कोटिंग्स > सहायक सामग्री
सहायक सामग्री निर्माताहरु
सहायक सामग्री लाई पट्टी पनि भनिन्छ, जो सामान्यतया आधार सामग्री, फिलर, पानी र additives बाट बनेको हुन्छ। मुख्य प्रकार्य स्प्रे गर्नु अघि रंग स्तर हो, ताकि रंग अधिक समान रूप बाट फैलन्छ। एक आधार स्तर भरिने सामाग्री को रूप मा, सहायक सामाग्री सबैभन्दा आधारभूत पर्खाल संग रंग फिल्म लाई जोड्ने मा एक भूमिका खेल्छन्। यो सीधा फिल्म को गठन पछि topcoat को समग्र प्रदर्शन र समग्र सजावटी प्रभाव को निर्धारण गर्दछ, र पनि भित्री प्रदूषण को स्तर लाई प्रभावित गर्दछ।
सहायक सामग्री वास्तु कोटिंग मा एक leveling भूमिका खेल्छ, पर्खाल चिकनी र नाजुक बनाउन। सिमेन्ट को संकुचन को कारण सतह दरारहरु अक्सर कोटिंग खोल को कारण, खस्ने, र भित्ता मा पानी टपकने कारण। तेसैले, विरोधी आत्म-क्र्याकि and र विरोधी क्र्याकि are सहायक सामग्री को गुणवत्ता को महत्वपूर्ण संकेतक हुन्। यसको अतिरिक्त, सहायक सामाग्री पनि राम्रो निर्माण गुणहरु, स्क्रैप गर्न को लागी सजीलो, सपाट गर्न को लागी सजिलो छ, कुनै कर्लिंग, कुनै कपाल छैन, र उपचार पछि sandability। बलियो सम्बन्ध बल, आधार सतह संग फर्म सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न को लागी, कुनै hollowing, कुनै पीलिंग। राम्रो पानी प्रतिरोध, पानी को लागी दीर्घकालीन जोखिम, गैर foaming, गैर पाउडरिंग र अन्य उत्पादन विशेषताहरु।
सहायक सामग्री मुख्य रूप बाट बाहिरी भित्ता इन्सुलेशन प्रणाली, भित्री भित्ता इन्सुलेशन प्रणाली, भित्री भित्ता टाइल चिपकने र caulking एजेन्टहरु, पनरोक र नमी प्रूफ कोटिंग्स, बाहिरी भित्ता टाइल र संगमरमर चिपकने र caulking एजेन्ट, आदि मा प्रयोग गरीन्छ।
चीन मा एक पेशेवर सहायक सामग्री निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, ईस्ट आर्गन केमिकल अनुकूलित को निर्माण को समर्थन गर्दछ सहायक सामग्री। एकै समयमा, सबै उत्पादनहरु फैशनेबल, उन्नत, टिकाऊ र उत्तम दर्जेको, र CE प्रमाणीकरण छन्। हाम्रा उत्पादनहरु को उच्च गुणस्तर आंशिक रूपमा छ किनकि हामी हाम्रो आफ्नै कारखाना छ र आंशिक रूपले हामी अनुभवी र कुशल कामदारहरु छ। के तपाइँ थोक सहायक सामग्री लाई समर्थन गर्नुहुन्छ? निस्सन्देह, यदि तपाइँ थोक, हामी तपाइँलाई सस्तो मूल्य, छुट र उद्धरण प्रदान गर्न सक्छौं। यसको अतिरिक्त, यो छुट उत्पादनहरु किन्न ठीक छ। यदि तपाइँ हामी संग सहयोग गर्न र उत्पादन किन्न चाहानुहुन्छ, हामी यसलाई कम मूल्य मा बेच्न सक्छौं। जस्तै भनिएको छ: सहयोग एक जीत-जीत हासिल गर्न! हामी तपाइँ संग सहयोग र एकसाथ साझा विकास साकार गर्न को लागी तत्पर छौं।